Hurumende Yokurudzira Kutengwa kweGorosi Munyika
HARARE — Gurukota rezvekurima, VaJoseph Made, vanoti hurumende inotarisira kuti gore rino makambani anogaya hupfu neanobika chingwa achatsigira varimi vegorosi sezvinoita makambani anotenga fodya nedonje.
Vachipa humbowo kukomiti yeparamende inoona nezvekurima maererano nehurongwa hwekurimwa kwegorsoi muchando gore rino, VaMade vati ivo negurukota rezvemari, VaTendai Biti, vakatoita musangano nemakambani aya vakaaudza kuti atsigire varimi vegorosi.
VaMade vati kana varimi vegorosi vave kutsigirwa nemakambani aya, zvinoreva kuti gorosi richawanda munyika uye makambani aya haazoshandisa mari yakawanda kutenga gorosi kubva kunze kwenyika sezvaari kuita pari zvino.
Vati hurumende yakaita chitsidzo neChipiri chekuramba ichitsigira mabasa ekurima zvikuru sei kurimwa kwegorosi nechibage.
Vatiwo mwaka uno vanotarisira kuti pacharimwa mahekita zviuru makumi mana zvegorosi. Vati izvi zvinoda mamiriyoni mamakumi masere nemasere emadhora. Vati pamari iyi, hurumende inotarisira kupa varimi madhora mamiriyoni makumi matatu.
Asi vati kuti munhu awane rubatsiro urwu, anofanira kunge aine dhamu rine mvura uye aine midziyo yekudiridzira, nzvimbo yekurima yakakwana pamwe nenhoroondo yehunyanzvi hwekurima gorosi.
Asi VaMade vati kuti kurimwa kwegorosi kubudirire, panodiwa kuti magetsi asangodzimwe dzimwe. Vati ZESA inofanirwa kuvavimbisa kuti haisi kuzodzima magetsi munzvimbo dzese dzinorimwa gorosi.
Vatiwo magetsi acho ari kudhura vakati vanoda kuti varimi vaderedzerwe mutengo wemagetsi kuitira kuti vakwanise kubudirira pamabasa avo.
Vazivisawo kuti mbeu yegorosi iripo, asi vakati fotireza yekudyarisa ndiyo isiri kukwana. Vatiwo hurumende ine chikwereti chinodarika mamiriyoni makumi mana emadhora kumakambani anogadzira fotireza izvo zvave kutadzisa makambani aya kushanda zvakanaka.
Vatiwo rimwe dambudziko rinotarisana nevarimi vegorosi kusabhadharwa neGrain Marketing Board vachiti pari zvino kambani iyi ine chikwere chemiriyoni nechidimbu chemadhora kuvarimi ava.
Vati GMB inoda mari ingangosvika kuzana remamiriyoni emadhora kuti ikwanise kutenga chibage chinokwanira nyika, kutenga motokari dzekutakurisa chibage pamwe nekumutsiridza kambani iyi iyo isiri kunyatsoshanda zvakanaka.
Kunyange hazvo nhengo dzekomiti iyi dzaratidza kugutsikana nehumbowo hwapihwa naVaMade, dzavaudza kuti hadzisi kufara nenyaya yekuti hapana ari kuda kudzipa mazita evanhu vakawana rubatsiro rwezvinhu zvekurima kubva kuReserve Bank of Zimbabwe neGMB.
Sachigaro wekomiti iyi, VaMoses Jiri, vati komiti yavo inoda humbowo uhwu isati yanyora gwaro raichatura mudare reparamende, kuitira kuti hurumende itore matanho anokodzera.